We.com.mm - ?ချစ်သူသက်တမ်း ၂ နှစ်နဲ့ ၄ လကြာပြီးနောက် Gigi နဲ့ Zayn တို့ လမ်းခွဲ ?
?ချစ်သူသက်တမ်း ၂ နှစ်နဲ့ ၄ လကြာပြီးနောက် Gigi နဲ့ Zayn တို့ လမ်းခွဲ ?
၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တွဲခဲ့ကြတဲ့ Gigi နဲ့ Zayn တို့ဟာ ချစ်သူသက်တမ်း ၂ နှစ်နဲ့ ၄ လကြာ အပြီးမှာ နားလည်မှုတွေနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့လိုက်ကြပါပြီလို့သိရပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ သူတို့ ၂ ယောက်စလုံးရဲ့ Twitter မှာ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။
Zayn ဘက်ကဆိုရင် “Gigi နဲ့ သူ ဟာ ပျော်ရွှင်ကောင်းတဲ့ RS သက်တမ်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Gigi ဟာ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးပါ။ သူမကိုတော့ ချစ်သူတစ်ယောက်လိုချစ်သလို သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်လိုလည်းချစ်ပါတယ်” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ ဒီလို လမ်းခွဲဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဟာ သူတို့ ၂ ယောက်စလုံးအတွက် တကယ်ကို ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း Zayn က ဖော်ပြထားပါတယ်။
Gigi ဘက်ကလည်း “Zayn နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေအတွက် ခံစားချက်တွေ မျှဝေခဲ့ကြတာတွေအတွက် သူ့ကိုတော့ ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။ ဒီလိုလမ်းခွဲလိုက်ခြင်းဟာသူ့အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်း Zayn ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို အားပေးသွားမှာပါ”ဆိုပြီး သူမရေးသားထားပါတယ်။
Zayn ဟာ 1D အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ First Single ဖြစ်တဲ့ PILLOW TALK စထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Gigi ဟာလည်း Model လောကမှာ ထိပ်ဆုံးကို ဦးတည်ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့ သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ ၂ယောက်လမ်းခွဲလိုက်ခြင်းဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ရာနှုန်းများတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
ဒီကြားထဲမှာလည်း Zayn ဟာ နောက်မကြာခင်မှာ ပရိသတ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးချပြမယ့် ဒုတိယမြောက် Studio Album အတွက် အလုပ်ရှုပ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်သိပ်ကို ချစ်ခဲ့ကြပြီး ပရိသတ်တွေ အားကျ၊ သဘောတူခဲ့ရတဲ့ Couple လေးမို့ အခုလို ဖြစ်သွားတဲ့အပေါ် ပရိသတ်တွေက အံံ့သြော် နှမြောမဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။
ဆေးကုသမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်တဲ့ Demi Lovato
philippines ချစ်သူတွေအတွက် philippines က cuttie boys (၁၀) ယောက်
အရင်က BTS အဖွဲ့ဖြစ်လာဖို့ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ လက်ရှိ Idol တွေက ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ